Safarka Jasiiradaha Cayman | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Meelaha Dalxiiska loo tago, Jasiiradaha
Adduunku wuxuu leeyahay jasiirado badan oo qurux badan iyo Badda Caribbean waxay uruurisaa qadar wanaagsan oo janooyin ah. Tusaale ahaan, Cayman Islands, oo ah dhul Ingiriis ah oo ku yaal inta udhaxeysa Jamaica iyo Jasiiradda Yucatan, oo caan ku ah ahaanshaha a canshuurta halkaas oo shirkadaha iyo maalqabeenada ay ka leexdaan canshuuraha.
Laakiin Jasiiradaha Cayman waxay leeyihiin kuwooda khasnadaha dalxiiska, markaa maanta waxaan ogaan doonnaa waxay yihiin, dhulkooda, dhaqankooda ...
2 Dalxiiska Jasiiradaha Cayman
Jasiiradaha wadar ahaan waa saddex waxayna ku yaalliin galbeedka badda Kariibiyaanka, koonfurta Cuba iyo waqooyi-bari ee Honduras. Waxay ku saabsan tahay Jasiiradda Grand Cayman, Cayman Brac iyo Little Cayman. Caasimaddu waa magaalada George Town, Grand Cayman.
Jasiiradaha ayaa la rumeysan yahay in uu daah furay Christopher Columbus sanadkii 1503 safarkiisii ​​ugu dambeeyay. Columbus wuxuu ku baabtiisay iyaga Las Tortugas, sababta oo ah tirada badan ee xayawaanadan, in kasta oo ay sidoo kale jireen alligators oo la sheegay in, halkan laga bilaabo, magaca ay maanta leeyihiin. Qadiimiga qadiimiga ah ma helin haraaga la degenaa kahor degitaanka reer Yurub, laakiin lama diidi karo.
Kadib jasiiraduhu waxay ahaayeen Meelaha burcad-badeedda, ganacsatada iyo dadka ka goostay ciidanka Cromwel, kaas oo markaa xukumay England. England waxaa ku hadhay jasiiradaha, oo ay weheliso Jamaica, ka dib markii la saxeexay heshiiskii Madrid ee 1670. In kasta oo wakhtigaas ay janno ku ahayd burcad-badeedda. Markii dambe, ka ganacsiga addoonta ayaa beddelay masiirkii jasiiradaha markii kumanaan laga keenay Afrika.
Muddo dheer Jasiiradaha Cayman waxay ku hoosjireen tababaraha Jamaica, ilaa 1962 markii Jamaica ay xornimada qaadatay. Sannado ka hor intaan garoonka diyaaradaha caalamiga laga dhisin jasiiradaha, markaa taasi waxay soo jiidatay dalxiiska. Kadib bangiyada, hudheelada iyo dekedda dalxiiska ayaa soo muuqday. Taariikh ahaan Jasiiradaha Cayman waxay ahaayeen meel aan canshuur laga qaadin. Waxaa jira sheeko aan run ahayn oo ka sheekeynaysa markab burburay oo dadka jasiiraduhu badbaadiyeen. Halyeeygu wuxuu leeyahay badbaadinta waxay badbaadiyeen xubin ka mid ah taajkii Ingriiska waana sababtaas darteed boqorka wuxuu ballanqaaday inuusan waligiis canshuur ...
Jasiiraduhu waa meelaha ugu sarraysa silsiladda buuraha hoostooda, Cayman Range ama Cayman Rise. Waxay qiyaastii 700 kiiloomitir u jiraan Miami iyo kaliya 366 u jirta Cuba. Jasiiradda Grand Cayman waa tan ugu weyn saddexda qof. Saddexda jasiiradood waxaa sameeyay coral oo daboolay buuraha dushooda xilligii Ice Age, haraaga Sierra Maestra ee Cuba. Cimiladeeda waa kuleyl kuleyl iyo qalalan.
Waxaa jira xilli qoyan oo ka bilowda Maajo ilaa Oktoobar iyo xilli aan roob lahayn bisha Nofeembar ilaa Abriil. Ma jiraan wax isbeddello weyn ah oo heerkulka ah, laakiin duufaano khatar ah ayaa ah kuwa ka gudba badweynta Atlantik laga bilaabo Juun ilaa Noofambar.
Dalxiiska Jasiiradaha Cayman
Aynu ka bilowno jasiiradda Grand Cayman. Kuwa quruxda badan Toddoba Mile Beachs waxay ku jirtaa 3-da meelood ee safarka maxaa yeelay waxay ku urursan tahay hoteelo iyo goobo fara badan. Tani waa mid xeeb xeeb leh xeebta galbeed ee jasiiradda, qurux badan. Waa xeeb dadweyne oo lug lagu baadhi karo iyo in kastoo magaceedu dheer yahay 10 kiiloomitir. Xeeb kale oo loo tago waa North Sound, oo hoy u ah stingrays.
George Town Waa magaalo xiiso leh oo leh qaabdhismeed dhaqameed, dukaamo bilaa cashuur ah, noocyo gaar ah oo loogu talagalay kuwa ugu taajirsan, laakiin sidoo kale dukaamada farsamada gacanta iyo alaabada maxalliga ah. Ka gudubka jasiiradda dhanka bari waad booqan kartaa Queen Elizabeth II Botanical Park ama Buluug Iguanass. Si loo ogaado taariikhda deegaanka waxaa jira Matxafka Qaranka ee Jasiiradaha Cayman, Rum Point iyo fursadaha quusitaanka iyo geedaheeda casuarina, the Pedro St Jame Castles, dhismaha ugu da'da weyn jasiiradaha, ama Magaalada Bodden, magaalada ugu horeysa jasiiradda.
Cayman Brac waa meesha ugu fiican ee la tago hadaad jeceshahay dabeecadda oo ma ahan dukaamada bilaa cashuurta ah. Jasiiraddu waxay leedahay godad dhagax oo lagu ogaado, waxaa jira godad god ah oo la sameeyo quusitaanka iyo quusitaanka, Xitaa markab quusasho leh, waxaa jira kaymaha cagaaran ee jasiiradda, guri qurux badan oo shimbiraha qalaad ah, oo lagu jaray waddooyin lagu raaxeysto socodka ... Halkan waxaad ku imaan kartaa diyaarad, nus saac, Grand Grandman.
Qeyb ahaan Little Cayman waa jasiirad fog, oo dhererkeedu yahay 16 kiiloomitir oo keliya iyo ballac hal kilomitir iyo badh ah. Waa meel aad u xasilloon, oo leh xeebaha cidlada ahs, geedo timireed oo dabaysha la socda, biyo nadiif ah ... Waad kiraysan kartaa baaskiil ama mooto si aad u sahamiso, ugu dabaalan biyaha diiran ee South Hole Sound Muddo, booqo kaydka Balli Dabiici ah, oo leh kumanaan shimbiro ah, oo ku dhex lugeynaya dhagaxyada dhexdooda ama dhex dabaalanaya Park Bay Bay Marine Marine.
Halkan waxaa jira mid 1500 mitir hoos u dhac marka waa magnet dadka kaladuwan, oo lagu daray Nolosha badda cajaa'ib leh oo ku dhuumanaya moolka dhexdiisa halkaasoo aysan ka yareyn fallaadho, libaaxyo iyo qoolleydu. Waxaad sidoo kale ku dhiiran kartaa inaad xoogaa shiraac ah oo kayak ah aadna gaartid Jasiiradda Owen, wax lamid ah Jasiiradda Cayman ee aan la aqoonsan.
Sideen u abaabuli karnaa booqasho jasiiradaha Cayman? Hagaag, 10 maalmood waxay noqon kartaa bilow wanaagsan haddii aad rabto inaad waqti ku qaadato Grand Cayman oo aad iskudaydo laba ama saddex maalmood jasiirad kale. Ujeedka Dayax malab ahWuu fiicanyahay maaddaama ay jiraan faras fuushan xeebta, casho gaar loo leeyahay, iyo fadhiyo hudheello hudheelada oo dhan. Isagoo ka hadlaya hoteelada, waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka dhan - oo dhan kuwa kalena waxay leeyihiin qorshooyin cunto iyo cabitaan ah oo aad adigu si gooni ah ugu bixiso.
Si aad u booqato Jasiiradaha Cayman Muhiim maahan in la shaqeeyo fiiso. Haddii aad tahay muwaadin u dhashay Mexico, Brazil ama Argentina, sidoo kale. Y wax talaal ah looma baahna, hadda. Dib ayaan ka arki doonaa waxa ku dhaca Covid. Waa run in dalxiiska intiisa badani ka yimaado Maraykanka laakiin waxaad kaloo ku imaan kartaa diyaarad ka timid Cuba iyo Honduras. Markaad gasho jasiiradaha waxaad isticmaali kartaa gaadiidka dadweynaha, basaska, tagaasida, kirada baabuurta ... Si aad ugu dhex booddo jasiiradaha haa ama haa waa inaad ku raacdaa diyaarad, Cayman Airways Express.
Dabcan, maskaxda ku hay in halkaan aad ku wado waddo bidix, Ingiriis wanaagsan. Waa maxay lacagta jasiiradaha Cayman? The Doolar Caymani ah, in kasta oo doolarka Mareykanka la aqbalo sidoo kale. Heerka sarrifku waa 1 doolarka Mareykanka ah 0.80 CI $ sent. Hagaag, waxaan rajeyneynaa in macluumaadkan uu kaa caawinayo inaad ka fikirto Jasiiradaha Cayman inay tahay meel fasax u noqon karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Meelaha Dalxiiska loo tago » Safarka Jasiiradaha Cayman
Plovdiv, maxaa lagu arkaa magaaladan Bulgaria